DISTRIKAN’I MANANJARY : Efa manomboka ny fanamboarana ny kianja manara-penitra
Taorian’ny fandresena miezinezina azon’ny ekipam-pirenena Barea tany Ejipta farany teo dia fanamby napetraky ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina ny hanamboarana kianja manara-penitra manerana ny Faritra maro eto Madagasikara hikolokoloana ny talentan’ny tanora malagasy. 9 janvier 2020
Ankoatra ny fanarenana sy fanavaozana ny kianjaben’i Mahamasina sy ny Kianja manara-penitra ao Barikadimy Toamasina, efa an-dalam-panamboarana koa amin’izao fotoana izao ny kianja manara-penitra any amin’iny Distrikan’i Mananjary iny.
Efa manomboka ny asa raha ny nambaran’ny Depiote avy any an-toerana ary vinavinaina ho vita ao anatin’ny efa-bolana eo ho eo izany. Efa vita tamin’iny herinandro ambony iny fandaminana ny toerana hananganana ny fotodrafitrasa sy ny fandravana ny kianja teo aloha ary afaka herinandro dia hiditra amin’ny fanamboara ny « Tribune » ny orinasa nahazo ny tolotra. Vinavinaina hahazaka olona hatrany amin’ny 1200 any ho any ity Kianja manara-penitra ity. Manodidina ny 120 metatra eo ho eo ny halavany ary 60 metatra ny sakany. Hisy « Gradin » amin’ny andaniny roa ary « Tribune » ny afovoany.
« Mbola angatahanay amin’ny Filoham-pirenena sy ny mpikarakara koa ny mba hanamboarana ny « Piste » manodidina io kianja io satria tena ilaina izany ary iaraha-mahalala rahateo fa ampiasain’ny mpianatra mandritra ny fiatehana ny laza adina ara-panatanjahan-tena ny kianja ankoatry ny fampiasan’ny mpanao fanatanjahan-tena azy » ,hoy ny Depiote Randrianandrasana Norbert.
Ankoatra ny fanamboarana ny « Gradin » sy ny « Tribune », hofefena koa ny manodidina ny kianja manontolo hiarovana azy tsy hidiran’ny omby sy hitandroana ny hamafiny. « Mankasitraka ny Filoham-pirenena izahay ary misaotra azy amin’ny finiavana ananany, velom-panantenana izahay manana azy satria na tsy mbola nangataka akory aza izahay dia efa nahazo sahady », hoy hatrany ny nambaran’ny Depioten’i Mananjary.